भारतबाट हस्तक्षेप नहोस्
‘नेपालमा जन्मेका गौतमबुद्धले मनको अँध्यारो हटाए, नेपालसँग यति ठूलो जलसम्पदा छ, जसले पूरै भारतको अँध्यारो हटाउन सक्छ' नरेन्द्र मोदी
गणतन्त्र भारतको कार्यकारी पदको सिंहासनमा विराजमान भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घोष गरेका थिए, ‘भारत दक्षिण एसियाका सबै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै विश्वसामु असल छिमेकीको उदाहरणीय दृष्टान्त दिन अग्रपंतिमा रहनेछ ।' शासन सम्हालेलगत्तै पहिले भुटान र त्यसपछि दोस्रो बरियता क्रममा नेपाल आएका थिए ।
नेपालको तत्कालीन व्यवस्थापिका-संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले नेपालमा जन्मेका बुद्धको ज्ञानको ज्योतिले मानव जातिको मनको अँध्यारोलाई उजिल्याएको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपाली नेताहरूलाई ऋषिमन लिएर अघि बढ्न सल्लाह दिएका थिए । मोदीले नेपालमा भएको जलसम्पदाको भण्डारले नेपाल मात्र होइन, पूरै भारतको अँध्यारो हटाउन सक्छ भन्दै जलविद्युत् परियोजनामा भारत लगानी गर्न तयार छ भनेका थिए । मोदीले त्यसो भनिरहँदा मोदीलाई नेपालको सिंगो संसद् र नेपाली जनताले भरोसा भएको नेताको रूपमा चित्रित गरेका थिए ।
आफ्ना समकालीन र आफूभन्दा अग्रज नेताहरूलाई पछि पार्दै विशाल भारतको कार्यकारी पदमा विराजमान हुन पुगेका मोदीको गद्दी आरोहणसँगसँगै खासगरी दक्षिण एसियाली देशहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार पलाएको थियो । नेपाल र नेपालीले उनको बोलीअनुसारको व्यवहार पनि होला भनेर ठूलो आशा र भरोसा लिएर बसेका थिए । अझ नेपाल भ्रमणका बेला उनले नेपालमा जेजस्ता तिलस्मी भाषण गरे, आफूलाई कट्टर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भन्नेहरूले समेत संसद्मा मच्चिइमच्चिई ताली बजाएका थिए ।
एक्काईसौं शताब्दीको सम्बन्ध भनेको विकासको सम्बन्ध हो, समृद्धिको सम्बन्ध हो । अझ छिमेकी मुलुकहरूले त एकअर्काको स्वअस्तित्व स्विकारेर अघि बढ्ने सम्बन्ध कायम गर्नैपर्छ । भारतीय शासक वर्गले नेपाल र भारतीय जनताबीचको सदियौंदेखिको ‘रोटी बेटी' को सम्बन्धलाई आफ्नो दलगत स्वार्थसँग जोडेर भद्दा राजनीति गर्दै आएका छन् । त्यसको पछिल्लो कडी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कथनी र करनीमा देखिएको आवरणबाटै प्रस्टिएको छ ।
गत फेब्रुअरी २७ मा भारतको गोरखपुरको एउटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले भनेका थिए, ‘मोदीको डीएनएमा नै ईष्र्या र रिस छ ।' कृपया मोदीजी राहुलको त्यो भनाइलाई मिथ्या सावित गर्न पनि गान्धी मन लिएर अघि बढ्नुहोस्, बुद्ध चित्त लिएर अघि बढ्नुहोस् । छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुहोस् । दुनियाँको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई त्यही सुहाउँछ, ठुल्दाइ प्रवृत्ति सुहाउँदैन । स्मरण रहोस्, छिमेकीसँगको कपटपूर्ण सम्बन्धले भारतको छवि दिनप्रतिदिन धुमिल बन्दै गएको छ । दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक भारतको सम्बन्ध कसैसँग पनि राम्रो छैन ।
नेपालको संविधान जारी हुने बेलामा भारतले खेलेको भूमिका, त्यसपछिको नाकाबन्दी, मधेसी मोर्चाले सिमानामा बसेर गरेको अवरोध र त्यसलाई भारतले गरेको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष तवरले पुर्‍याएको सहयोगबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारतीय सत्ता नेपालका हरेक आन्तरिक घटनाक्रम मा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट' गर्न उद्यत् रहन्छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरूको बहुमतले पारित संविधानप्रति नेपालभित्रै असन्तोषका स्वर गुन्जिनु स्वाभाविक होला तर मित्रराष्ट्र भारतले त्यसमा दखल अन्दाज गर्नु भारतले आफ्नो ठुल्दाइ प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्ति गर्नु हो भन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण नहोला ।
भारतीय जनता पार्टीका नेता अटल बिहारी बाजपेयीले धेरै पहिले अघि सारेको भारत, पाकिस्तान र नेपाल सम्मिलित बौद्ध पर्यटन सर्किटको अवधारणालाई खुम्च्याउँदै नेपालको लुम्बिनी र भारतको बोधगयामा बौद्ध पर्यटन रुट चलाउन सकिने प्रस्ताव पुनः अघि सारेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुवै देशको समृद्धिको ढोकामा आग्लो लगाउँदै नेपाली जनतालाई नाकाबन्दीको ठूलो उपहार दिए ।
मोदी र भारतीय सत्ताले गत वर्षको नाकाबन्दीलाई नेपाल सिर्जित भने पनि स्वयं भारतीय सञ्चारमाध्यमले नाकाबन्दीविरोधी नेपालमा उठेका आवाजलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरे । नाकाबन्दी मानवताविरुद्धको अपराध हो भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले भारतीय दूतावासअगाडि गरेको प्रदर्शनलाई संसारभरका सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिए ।
भारतका प्रायः सबै चर्चित अखबारले शान्ति समाजसँग आबद्ध मानवअधिकारकर्मीहरूको गिरफ्तारीको समाचारलाई अग्रभागमा स्थान दिएका थिए । नेपाल र नेपाली जनताप्रति गरिएको दुव्र्यवहारका कारण मोदी भारत र विश्वसामु नै लज्जित हुनुपर्‍यो । एउटा सामान्य गरिब किसानको परिवारमा जन्मेर शासनको शिखरमा पुगेका व्यक्तिद्वारा जनसंख्या र भौगोलिक दुवै हिसाबले सानो छिमेकी मुलुकप्रति जुन दुव्र्यवहार गरियो, त्यसको इतिहासले मूल्यांकन गर्ला नै, तर मोदी डक्ट्रिन असफल त भयो नि !
भारतले विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्ने हो भने नेपालसँग विगतमा गरिएका जेजति सम्झौता छन्, त्यो सबै कार्यान्वयन गर्नेतर्फ तत्काल अग्रसर हुनुपर्छ । यसका साथै असमान सन्धिहरूबारे पुनरावलोकन हुनैपर्छ । सुस्ता र कालापानीलगायतका विवादास्पद क्षेत्रको विवाद वार्ताद्वारा सुल्झाउन भारत उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ । नेपाल-भारत सीमालाई अद्यावधि बनाउनुपर्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भारत जो आफूलाई वर्तमान विश्व राजनीतिमा अघि बढाइरहेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि सबै प्रकारका तरक्कीले भारत उदाउँदो शक्ति राष्ट्रको रूपमा उभिएको छ । तर भारतीय सत्ता र अझ भने प्रधानमन्त्री मोदी जुन सपना बोकेर मैदानमा होमिएका छन्, ती सपना पूरा गर्न सर्वप्रथम छिमेकी मुलुकहरूप्रतिको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । मुखमा राम, राम बगलीमा छुरा राख्ने प्रवृत्तिले उनको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । अरूलाई उपदेश दिन सजिलो हुन्छ, आफू उदाहरणीय बन्न सके मात्र नेता राजनेता हुन सक्छन् अन्यथा नायक खलनायकमा परिणत भएका दृष्टान्त दुनियाँमा धेरै छन् ।
नेपालको दक्षिणी भागमा बस्ने नेपाली र भारतीय जनताबीच सदियौंदेखि रोटीबेटीको सम्बन्ध कायम छ । नेपाली भाषा र हिन्दी भाषाको लिपि नै एउटै छ— देवनागरी लिपि । धार्मिक र सांस्कृतिक कुराहरू एक छन् हाम्रा । जनताबीचको सम्बन्ध सेतु भत्काउने काम बेलाबेलामा शासनमा बस्नेहरूबाट हुँदै आएको छ ।
नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने साउथ ब्लक र त्यसको नेतृत्वकर्ताले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्र नेपाल र भारतको सम्बन्धमा आँच आउँदैन । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गर्न किमार्थ मिल्दैन । संविधान कस्तो बनाउने ? कसलाई राष्ट्रपति बनाउने ? कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेलगायतका विषयमा भारतले चासो राख्ने होइन । अनावश्यक चासो राख्दा दुई देशबीचको मित्रतामा खलल पुगिरहन्छ ।
विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै नेपाल र भारतका नेताहरूले अब उप्रान्त दुवै देशको श्रीवृद्धि हुने काममा हातेमालो गरेर अघि बढ्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । हालैका दिनहरूमा भारतले नेपालको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनालगायतका आयोजनामा सकारात्मक चासो देखाएको छ, यो शुभसंकेत हो ।